Kubvumirana | Law & More | Eindhoven & Amsterdam
Munharaunda yanhasi, kukosha kwekuteerera kwawedzera kukosha. Kuenderana kunobva pashoko reChiShona 'kutevedzera' uye zvinoreva 'kutevedzera kana kuteerera'. Kubva pane maonero emutemo, kutevedzera kunoreva kutevedzera nemitemo nemirairo inoshanda. Izvi zvakakosha kwazvo kune ese kambani uye institution. Kana mitemo nemirairo zviripo zvikasaendeswa, matanho anogona kuiswa nehurumende.
Munharaunda yanhasi, kukosha kwekuteerera kwawedzera kukosha. Kuenderana kunobva pashoko reChiShona 'kutevedzera' uye zvinoreva 'kutevedzera kana kuteerera'. Kubva pane maonero emutemo, kutevedzera kunoreva kutevedzera nemitemo nemirairo inoshanda. Izvi zvakakosha kwazvo kune ese kambani uye institution. Kana mitemo nemirairo zviripo zvikasaendeswa, matanho anogona kuiswa nehurumende. Izvi zvinosiyana kubva pamubhadharo wekutonga kana mubhadharo wekubhadhara kudzoserwa rezinesi kana kutanga kwenyonganiso yemhosva. Kunyangwe kutevedzera kunogona kuenderana nemitemo yese iripo uye nemirairo, mumakore achangopfuura kutevedzera kwakanyanya kuita chikamu mumutemo wezvemari uye mutemo wekuvanzika.
Yako yedata inoreva chero ruzivo rwune chekuita newakazvizivikanwa kana munhu anozivikanwa munhu wechisikigo. Izvi zvinoreva kuti ruzivo urwu rune chekuita zvakananga kune mumwe munhu kana kuti runogona kurondedzerwa zvakananga kumunhu iyeye. Inenge sangano rega rega rinofanirwa kubata nekugadzirisa kwega data. Izvi zvatova izvo, semuenzaniso, kana iyo yekubhadhara kwekutengesa yakagadziriswa kana iyo data yemutengi ichichengetwa. Izvi zvinodaro nekuti kugadziriswa kwedata remunhu kune chekuita nevatengi pamwe nevashandi vekambani. Zvakare, chisungo chekutevera neGDPR inoshanda kumakambani pamwe nekumasangano emagariro akaita sekirabhu yemitambo kana nheyo.